Anabolika - Fanampiny Brezila
Steroids anabolika: fantaro ny karazany sy ny vokany rehetra amin'ny vatana!
Ampiasain'ny olona maniry ny fananganana atletika, ny steroid anabolika dia miteraka fisalasalana maro momba ny fahombiazany. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika hoe inona izy ireo… Tohizo ny famakiana »Steroids anabolika: fantaro ny karazany sy ny vokany rehetra amin'ny vatana!
Anabolika voajanahary: fantaro izay tokony hampidirina amin'ny sakafonao mba hahazoanao tambabe!
Aogositra 1, 2018 29 Novambra 2021
Iza no tsy naniry ny hanana vatana salama amin'ny endrik'ireo hita amin'ny gazety. Ny olona sasany, te-hanatratra io tanjona io, dia miantso ny… Tohizo ny famakiana »Anabolika voajanahary: fantaro izay tokony hampidirina amin'ny sakafonao mba hahazoanao tambabe!
Anabol: Inona izany, ahoana no raisina, ny firafiny ary maro hafa!
18 Mey 2018 29 Novambra 2021
Betsaka ny akora anabolika eny an-tsena, maro amin'izy ireo no tsy ara-dalàna, izay mety hanimba ny fahasalaman'ny atleta, indrindra fa rehefa mihinana... Tohizo ny famakiana »Anabol: Inona izany, ahoana no raisina, ny firafiny ary maro hafa!
Oxandrolone: ​​Mihena ve ny lanja? Inona avy ireo tombony sy loza mety hitranga?
17 Mey 2018 29 Novambra 2021
Amin'ny fikatsahana vatana tonga lafatra sy fikatsahana ny vokatra azo avy amin'ny fiofanana dia mahazatra ny olona mampiasa fanampin-tsakafo na fampiasana… Tohizo ny famakiana »Oxandrolone: ​​Mihena ve ny lanja? Inona avy ireo tombony sy loza mety hitranga?
TPC - Post Cycle Therapy: Ireto ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
Zava-misy fa ny steroids dia anisan'ireo olana mampiady hevitra indrindra amin'ny orinasa fanampin-tsakafo sy anabolika, sa tsy izany? Fa izany koa dia… Tohizo ny famakiana »TPC - Post Cycle Therapy: Ireto ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
Trenbolone: ​​tsara ve? Inona avy ireo atahorana? Inona avy ireo vokany?
Aprily 20, 2018 29 Novambra 2021
Attention! Ny tanjonay dia ny tsy hamporisika ny fampiasana steroids. Ity lahatsoratra ity dia natao ho fampahafantarana ihany. Ampiasaina betsaka amin'ny bodybuilders, trenbolone dia iray amin'ireo… Tohizo ny famakiana »Trenbolone: ​​tsara ve? Inona avy ireo atahorana? Inona avy ireo vokany?
Primobolan: Fantaro ny momba an'io steroid io izay mampanantena fitomboan'ny hozatra!
20 Novambra 2017 30 Novambra 2021
Rehefa tonga amin'ny endrika, ny fahazoana hozatra faobe sy ny famaritana hozatra dia mety tsy ho mora. Fiofanana sy… Tohizo ny famakiana »Primobolan: Fantaro ny momba an'io steroid io izay mampanantena fitomboan'ny hozatra!